EA040 - OMG 3 in 1 Wireless Nurse Call Caregiver Pager, SOS miantso fanairana rafitra fanairana, Motion sensor jiro alina | Vahaolana OMG
3 amin'ny 1 Mpandika Smartphone tsy misy fepetra + fantson-dàlana fitifirana alina alina + mpitsabo mpanampy mpikarakara Pager, SOS miantso fampandrenesana alarm system maro samihafa DIY Kit
Technical famaritana Smart Night Light Push Button SOS Button
Power famatsiana DC 6V (CR123A batterie * 2) DC 3V (2032 batera * 2) DC 3V (2032 batera * 2)
Volana isam-bolana 4-Level / /
Mijanona ho amin'izao fotoana izao 170μA / /
Fahita tsy misy tariby 868MHz 868MHz 868MHz
Wireless lavitra ≤300m (amin'ny toerana malalaka) ≤300m (amin'ny toerana malalaka) ≤300m (amin'ny toerana malalaka)
tantera-drano Soso-drano tsy misy rano Soso-drano tsy misy rano Soso-drano tsy misy rano
Ny mpamantatra antsika dia mitondra amin'ny alàlan'ny fahefana matanjaka mpamonjy CR123A batteries (tafiditra) izay miaina hatramin'ny 365 andro. Mahay mampiasa sy mamonjy ny volanao. Solon'ny Alam-barotra Alam-pahazavana rehefa miantso ny mpandihy. Tsy hahita ny toy izany eny an-tsena ianao.
Feo peratra malaza 52 miaraka amin'ny 4-Level of adjustable volume: Hira malaza malaza eran-tany ho anao hisafidianana arakaraka ny toe-tsainao samihafa; Haavo 4 amin'ny volavola azo ovaina avy amin'ny 0db-90db
Battery mandeha amin'ny angovo ambany: Afaka miasa ao amin'ny mode standby izy mandritra ny taona 1.
Fitaovana be dia be: Ny hazavana mavo LED eo amin'ny receiver (singa mainty) dia mipetaka + fampandrenesana rindry rehefa manapoaka ny bokotra na bokotra pania, tsy ho very ny zava-mitranga, izay manokana ho an'ny olona mihaino tsy mahazatra.
Portable sy mora fametrahana: Tsy misy fepetra takiana, ny vokatra rehetra dia azo arahina amin'ny fonosana nofantsihina na amin'ny fametahana ny rindrina. Ny Transmitter Call Button dia kely ampy ho entina toy ny ampongabendanitra, entina ao am-paosiny, na napetraka eo am-pandriana na azonao entina mora foana.
Waterproof drafitra: Ny bokotra fanindriana dia omena rano fisotro madio ho an'ny fampiasana ivelany.
Fampiharana: Azonao ampiasaina amin'ny toerana isan-karazany toy ny trano, hotely, birao, trano, efitrano, efitrano fianarana, efitrano fianarana ary ny sisa.
Panic SOS button: Tsara ho an'ny mpikarakara sy ny marary / ny zokiolona / ny mponina / ny kilemaina / ny marary. Io dia ahafahan'izy ireo miantso vonjy ao an-trano. Aza mila mikiakiaka hahazoana ny sain'ny olona iray. Fanomezana feno fiheverana ho an'ny ray aman-dreninao be taona na marary.
Tsindrio ny bokotra SOS mandritra ny 5 segondra, hiditra ao amin'ny tobin'ny fitaovam-piadiana ny rafitra ary hampiato ny fanairana.
13065 Total Views 11 Views Today
EA043 - Fanairana OMG Smart Motion Wireless PIR Motion Sensor Alarm